राष्ट्रपतिबाट हटेको पाँच महिनापछि ओबामाले घर किने, मूल्य कति ? - Samudrapari.com
राष्ट्रपतिबाट हटेको पाँच महिनापछि ओबामाले घर किने, मूल्य कति ?
५३१० पटक हेरिएको
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको परिवारले वाशिङटनमा घर किनेका छन् जसमा उनीहरु भाडामा बस्दै आएका थिए ।
नौ वटा बेडरुम रहेको यो घर शहरको नजिक रहेको क्षेत्र कालोरामा रहेको छ । उहाँले यसलाई ८१ लाख डलर (करिब ८३ लाख रुपैयाँ) मा किन्नुभएको हो । ओबामाको पन्ध्र वर्षीय कान्छी छोरी साशाको हाई स्कूल पास गर्ने बेलासम्म ओबामा परिवार वाशिङटनमा बस्नेछन् ।
जनवरीमा कार्यकाल समाप्त भएसँगै पूर्वराष्ट्रपति ओबामा तथा उहाँकी पत्नी मिशेल ओबामा विश्व यात्रामा निष्कनुभएको थियो ।
ओबामाका प्रवक्ता केविन लुइसले घर किनेको पुष्टि गर्दै ओबामा पछिल्लो ढाई वर्षसम्म वाशिंगटनमा रहने बताउनुभयो । जसका कारण उहाँले घर किन्ने फैसला गर्नुभएको हो ।
अमेरिकाका जासूसी एजेन्टले यस घरलाई चौविशै घण्टा निगरानी गर्नेछन् । ओवामाको परिवारसँग शिकागोमा पनि एक घर छ । उहाँले यो पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टनका प्रेस सचिव जो लाँकहार्टसँग किन्नुभएको थियो ।
ओबामाको यस घरको नजिक अनलाई कम्पन अमेजनका मालिका जेफ बेजोसको घर पनि छ । राष्ट्रपति ट्रम्पकी छोरी इवांकाको घर पनि ओबामाको घर नजिक रहेको छ ।